မြန်မာနှင့် ဂျပန် ဗီဇာကင်း လွတ်ခွင့် အတွက် နှစ် နိုင်ငံ လက်မှတ် ရေးထိုးရန် စီစဉ်
မြန်မာ နိုင်ငံနှင့် ဂျပန် နိုင်ငံတို့ အကြား သာမန် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင် သူများ အနေဖြင့် ဗီဇာ မလိုဘဲ သွားလာ နိုင်ရန် အတွက် နှစ် နိုင်ငံ အစိုးရ အဖွဲ့ တို့ အကြား စီစဉ် ဆောင်ရွက် လျက် ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြား ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ သိရသည်။ လက်ရှိ တွင် နှစ် နိုင်ငံ သံတမန် များ နှင့် အဆင့်မြင့် အရာရှိ များ အနေဖြင့် သွားလာ နိုင်ရန် ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပြီး သာမန် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင် သူ တိုင်း သွား လာ နိုင်ရန် စီစဉ် လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ နိုင်ငံခြား ရေး ဝန်ကြီးဌာန ကောင်စစ် ရေးရာ နှင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ စာချုပ်များ ဦးစီး ဌာနမှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦးက “ဂျပန် နိုင်ငံနဲ့ နှစ် နိုင်ငံ လက်မှတ် ရေးထိုး နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက် နေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဂျပန် နိုင်ငံနှင့် ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိ ပါက ပြည်တွင်း သို့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု များ အပြင် ခရီးသွား လုပ်ငန်း များပါ တိုးတက် လာနိုင် ကြောင်း ပြည်တွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အသိုင်း အဝိုင်းက သုံးသပ် ပြောသည်။ “အသေး စားနှင့် အလတ် စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဦး အောင်ဟိန်း က “လက်ရှိ မှာ ဂျပန် ကတော့ မြန်မာ နိုင်ငံ ကို အလွန် စိတ်ဝင်စား တယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ သူတို့ အတွက် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင် ဖို့ အကွက် အကွင်း တွေ ရှိနေတယ် လို့လဲ ယုံကြည် တယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု နဲ့ လူမျိုးချင်း နီးစပ်မှု တွေ ကြောင့် မြန်မာ ပြည် ကို လာချင် ကြ တယ်။ နှစ် နိုင်ငံ ဗီဇာ ကင်းလွတ် ခွင့် ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ စီးပွားရေး အတွက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု တွေ တိုးလာ နိုင်တယ်” ဟု သုံးသပ် ပြော သည်။ လက်ရှိ တွင် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ဗီဇာ အမျိုးအစား လေးမျိုး ရှိပြီး နိုင်ငံ ပေါင်း ၅၁ နိုင်ငံ ကို သတ်မှတ် စည်းကမ်း ချက်များ နှင့် ကိုက်ညီ ပါက ဆိုက်ရောက် ဗီဇာ ထုတ်ပေး လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
at 12/20/2013 11:39:00 AM No comments:
အမျိုးသမီးအသင်း အကြိုဗိုလ်လုပွဲ ရှုံးနိမ့်အပြီး ငါးမိနစ်အတွင်း အမျိုးသားကြီးတစ်ဦး စိတ်ထိခိုက်ပြီး သေဆုံးခဲ့...
၁၈-၁၂-၂၀၁၃ ရက် ညပိုင်းက ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြသော ထိုင်းနှင့်မြန်မာ အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းတို့၏ အကြိုဗိုလ်လုပွဲစဉ်ကို ရုပ်မြင်သံကြားမှ စောင့်ကြည့်သည့် အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ပွဲစဉ်အပြီး ငါးမိနစ်ခန့်တွင် မြန်မာအသင်းရှုံးပွဲကြောင့် စိတ်ထိခိုက်ပြီး သေဆုံးခဲ့ရမှု ကျောက်တန်းမြို့နယ် ကျေးရွာတစ်ရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“ကျွန်မတို့ထဲမှာ ဘောလုံးပွဲလာကြည့်တယ်။ ကျွန်မတို့တဲနဲ့သူ့တဲက ဆိုင်ကယ်နဲ့ ငါးမိနစ်လောက်ပဲမောင်းရတာ။ ဘောလုံးပွဲကြည့်ပြီးတော့ သူ့သားနှစ်ဦးနဲ့အတူ ဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်တာ အငယ်ကောင်က ရှေ့က၊ အလတ်ကောင်က နောက်က၊ သူက အလယ်ကပါ။ သူ့တဲကိုလည်းရောက်ရော အသက်ပါမလာတော့ဘူး”ဟု တူမဖြစ်သူ ဒေါ်တင်တင်နိုင်က ပြောကြားသည်။
ဦးစံမြင့်သည် အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဆုံးအဖြတ်ပွဲစဉ်ကလည်း ကြည့်ရှုခဲ့ဖူးပြီး ဘောလုံးအားကစားဝါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်ကာ အမျိုးသမီးပွဲစဉ်ကြည့်ပြီး မကွယ်လွန်ခင်အထိ ကျန်းကျန်းမာမာပင်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ “အမျိုးသမီးပွဲကြည့်ပြီးလို့ ရှုံးသွားတော့ ငါ့ရင်ထဲမှာ မကောင်းဘူးကွာလို့ ပြောပါတယ်”ဟု ဒေါ်တင်တင်နိုင်က ပြောသည်။ “မနက်ဖြန် ၂၀-၁၂-၂၀၁၃ သင်္ဂြိုလ်မှာပါ”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အမျိုးသမီးအသင်းပွဲစဉ်တွင် ပွဲကြည့်ပရိသတ်များကို အကြီးအကျယ် စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့ကြောင်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် ထုတ်ဖော်ရေးသားကြသည်များကို တွေ့ရသည်။
at 12/20/2013 11:37:00 AM No comments:
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၉ ရပ်ကွက်၊ သူရလမ်းတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် နေအိမ် ၁၅ လုံး ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီး လူဦးရေ ၂၀၈ ဦးခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၉ ရပ်ကွက်၊ သူရလမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်မှ စတင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် နေအိမ် ၁၅ လုံးခန့် မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကာ လူဦးရေ ၂၀၈ ဦးခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် နံနက် ၂ နာရီခွဲခန့်တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီး၊ သူရလမ်း၊ အမှတ် (၉၀) နေ ဒေါ်ခင်သန်း၏ နေအိမ်အောက်ထပ်တွင် ငှားရမ်းနေထိုင်သူ မျိုးမြင့်အောင် (၃၁)နှစ် သည် နေအိမ်အခန်းအတွင်း၌ လျှပ်စစ်မီးပူအား မီးပလတ်ထိုးထားရာမှ အပူလွန်ကဲကာ အနီးရှိ အကြော်ကြော်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဖွဲအိတ်များအား မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းရာမှ ယခုကဲ့သို့ မီးလောင်မှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုအား မီးသတ်ယာဉ်အစီး ၅၀၊ အထောက်အကူပြုယာဉ် လေးစီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် နှစ်စီးဖြင့် မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရပြီး နံနက် ၃ နာရီခွဲခန့်တွင် မီးညွန့်ကျိုးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့မီးလောင်မှုကြောင့် အဆိုပါ ရပ်ကွက်၏ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နေအိမ်တစ်လုံးအပါအ၀င် နေအိမ် ၁၅ လုံး မီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်စု ၄၅ စုရှိ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၈ ဦးခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကာ ယင်းရပ်ကွက်ရှိ မစိုးရိမ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်ရှိ ဓမ္မာရုံတွင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
" ကျွန်တော် မီးရောင်မြင်လို့ အိပ်ရာက ထကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မီးကတော်တော် ကြီးနေပြီ။ အခုမီးလောင်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ပဲကြော်ကြော်တဲ့ အကြော်ဖိုတွေတော်တော်များတယ်။ ၁၆ ဖိုလောက်ရှိတယ်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်တော့ ပါသွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အနီးက မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်က ဆရာတော်တစ်ပါးက မီးလောင်တယ်ဆိုပြီး စပီကာနဲ့အော်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေက လေဖြတ်နေတဲ့သူတွေကို အရင်ဆွဲထုတ် ပြီးတော့ ၀ိုင်းငြှိမ်းသတ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆီပုံးတွေရှိတဲ့အတွက် မီးကအရမ်းကြီးလာပြီး မီးသတ်ကားတွေနဲ့ ငြှိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျမှ မီးညွန့်ကျိုးသွားတာပါ။ လေကလည်း တိုက်နေတော့ မီးသတ်ယာဉ်တွေ အရင်ရောက်မလာရင် တစ်ရပ်ကွက်လုံးမလွယ်ဘူး " ဟု အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သော နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်သူ ကိုထွန်းနိုင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်ကျွမ်းမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားမှူး ဦးတင်မင်းက " လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို စနစ်တကျ သွယ်တန်းတပ်ဆင်ထားမှု မရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် မီးလောင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့် လျှပ်စစ်ကြောင့် လောင်ရတာလဲဆိုတာက ထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားတွေရှိတယ်။လျှပ်စစ်ကြိုး၊ ကိရိယာတွေ၊ ပစ္စည်းတွေကို အပြင်က လောင်တဲ့ပုံစံနဲ့ အဲဒီပစ္စည်းတွေက အပူလွန်ကဲပြီး လောင်တဲ့ပုံစံကကွာပါတယ်။အပြင်ကလောင်တဲ့အရောင်က ရိုးရိုးတန်းတန်းအရောင်ပါပဲ။ အဲဒီလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေက တစ်ဆင့် ၀ိုင်ယာရှော့ကြောင့် လောင်တဲ့မီးတွေက အရောင်တွေ ထွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီအချက်ကို အဓိကကြည့်ပြီး လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာရှော့ကြောင့် လောင်တာဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ် " ဟု ပြောကြားသည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှ မီးပေါ့ဆစွာအသုံးပြုသူ မျိုးမြင့်အောင်အား မရမ်းကုန်းမြို့မရဲစခန်းက (ပ) ၅၁၉/၂၀၁၃ ပုဒ်မ ၂၈၅ ဖြင့်အမှုဖွင့်ကာ အရေးယူရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မရမ်းကုန်း ၉ ရပ်ကွက်၊ သူရလမ်းရှိနေအိမ်များ မီးလောင်နေမှုအား ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် နံနက် ၂ နာရီခွဲခန့်၌ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မင်းသိန်းနိုင်)
at 12/20/2013 11:34:00 AM No comments:
အတန်းစီနေချိန် "သယ်ရင်း. မင်းဘာလုပ်နေလဲ" ဟု အမေးခံရသောအခါ အကောင်းဆုံးအဖြေ - "အေး လက်မှတ် တစ်စောင်နဲ့ သိန်းတစ်ထောင် အလကား ပေးတယ်ဆိုလို့ တန်းစီနေတာလေ"
အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဒေါက်ဖိနပ်ချွန်ဖြင့် တက်နင်းပြီး "ဆောရီးနော်. နာသွားလာဟင်" ဟု မေးသော အခါ အကောင်းဆုံး အဖြေ - " ဟင့်အင်း. ခြေထောက်က သံနဲ့ လုပ်ထားတာ။ မာနေတာပဲ။ နောက်တစ်ခေါက် ထက်နင်းပါအုံး"
သူငယ်ချင်းက ရောက်လာပြီး "မင်း တီဗီကြည့်နေတာလား" ဟုမေးသော အခါ အကောင်းဆုံး အဖြေ "ဟင့်အင်း တီဗီထဲကနေ လူတွေ အပြင်ထွက်လာ မလားလို့ စောင့်ကြည့်နေတာ"
အစရှိသဖြင့် မဆီလျော်သော မေးခွန်းနှင့် မဆီလျော်သော အဖြေများစွာ ...
at 12/20/2013 11:28:00 AM No comments:
မန္တလေးဘူတာကြီးတွင် ဟိုတယ်နှင့် ရှော့ပင်းမောဖွင့်ရန် တင်ဒါအောင်သည့် ကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်းမစနိုင်သေး
မန္တလေးဘူတာကြီး အဆောက်အအုံ စတုတ္ထထပ်မှ ခေါင်မိုးအထိ လေးထပ်ကို ငှားရမ်းကာ ဟိုတယ်နှင့် ရှော့ပင်းစင်တာများဖွင့်လှစ်ရန် ဧပြီလကတည်းက တင်ဒါအောင်ခဲ့သော်လည်း နှစ်ကုန်သည်အထိစာချုပ် ပင် ချုပ်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မှုလည်းမရှိဘဲ ဖြစ်နေသည်။
မြန်မာ့မီးရထား(မန္တလေး) စီးပွားရေးဌာနမှ တိုင်းမန်နေဂျာ ဦးဇော်မင်းသက်ကမူ စိစစ်ရွေးချယ်မှုများ ပြု လုပ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ “အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်နေပါတယ်၊ ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုချက် တင်ပြတဲ့အပေါ်မှာ တိုင်းသမ၀ါယမရုံးနဲ့ ဟိုတယ်ခရီးတို့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်တွေကိုရပြီးမှ စာချုပ်ချုပ်ရမှာပါ၊ အသေးစိတ်အစီအစဉ် တွေကိုတော့ ရုံးချုပ်ကပဲ သေချာသိမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် စာချုပ်မူကြမ်းသာပြီးစီးသေးပြီး စာချုပ်မူကြမ်းတွင် တစ်နှစ်လျှင် ကန်ဒေါ်လာလေးသိန်း လေးသောင်းခန့်ဖြင့် ငှားရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုပမာဏသည် အတည်မပြုရသေးကြောင်းနှင့် ငှားရမ်းသည့်ကာ လမှာ ၁၅ နှစ်တစ်ကြိမ်နှင့် ငါးနှစ်သုံးကြိမ်ဖြင့် နှစ် ၃၀ ငှားရမ်းမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
စတုတ္ထထပ်မှခေါင်မိုးထပ်အထိ လေးထပ်စလုံးကို ငှားရမ်းမည်ဖြစ်ပြီး လေးထပ်မြောက်၏ခန့်မှန်းအကျယ် မှာ စတုရန်းမီတာ ၄၆,၈၈၀၊ ငါးထပ်၏အကျယ်မှာ ၃၅,၇၈၃ စတုရန်းမီတာ၊ ခြောက်ထပ်မြောက်မှာ ၄၀, ၁၈၀ စတုရန်းမီတာနှင့် ခေါင်မိုးထပ်အကျယ်မှာ ၃၉,၁၃၃ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။
ထို့အတူ မြန်မာ့မီးရထားပိုင် ဟိုတယ်နှစ်လုံးဖြစ်သည့် ပုပ္ပါးဟိုတယ် (၁) နှင့် (၂) ကိုလည်း အောက်တို ဘာလကုန်က တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ သာလွန်ကုမ္ပဏီက ပုပ္ပါး ဟိုတယ် (၁) ကိုလည်းကောင်း၊Adventure Myanmar Group က ပုပ္ပါးဟိုတယ် (၂) ကိုလည်းကောင်း တင်ဒါအောင်ခဲ့သည်။
at 12/20/2013 10:39:00 AM No comments:
တစ်ချိန်တုန်းက ဒိန်းမတ်ဘုရင်တစ်ပါး ရှိပါတယ်။ Harald Bluetoothလို့ အမည်ရ ပါတယ်။ c.935 တုန်းကပါ။ ဒိန်းမတ်နဲ့ နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံ ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ စစ်ခဏခဏ ဖြစ်ပြီး ကွဲပြားနေတဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးရအောင် ကြားကနေ ဆက်စပ်ပေးပြီး သူ့ရဲ့  ထူးချွန် ထက်မြတ် တဲ့ စကားပြော စွမ်းရည်ကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းအဆင်ပြေပြီး ဘုရင် တစ်ပါး ဖြစ်လို့လာပါတယ်။
ဒီတော့ ဆွီဒီအခြေဆိုက် Ericsson ကုမ္မဏီက မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး ချိတ်ဆက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေ မျှဝေတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ နည်းပညာ Protocol ကို Bluetooth လို့ အမည်ပေး ပါတယ်။ နှစ်ဖက် စလုံးက ဖွင့်မယ် ပြီးတော့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ချိတ်ဆက်မှု အကြောင်းပြန်ပြီး အချက်အလက်တွေ ပေးပို့မယ် အစရှိသဖြင့် အဆင်ပြေမြန်ဆန်တဲ့ ကြိုးမဲ့ အချက်အလက် ကူးပြောင်းရေး စနစ် တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ Bluetooth ဆိုတာ သွားပြာ မဟုတ်ပါဘူး။ Harald Bluetooth ရဲ့ အမည်သာ ဖြစ်ပြီး သူ့ကို ဂုဏ်ပြုလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ protocol တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းလိုက်ရ ပါတယ်။
at 12/20/2013 10:35:00 AM No comments:
“သူတို့ကို မြစ်ကြီးနားကိုရောက်ကတည်းက သွားမယ့်နေရာမေးတော့ တနိုင်းဆိုရင် ကန့်သတ်နယ်မြေ သွားလို့မရဘူးပြောတယ်။ နောက်ဆုံး ဌာနပေါင်းစုံစစ်တဲ့ ရှဒေါင်ဂိတ်ထိ သွားလို့မရဘူးလို့ တားတာကို သူတို့က မှန်လုံကားနဲ့သွားတယ်။ ကုမ္ပဏီကလာတယ်ဆိုလည်း သူတို့ဆီမှာ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုင် စင် အထောက်ထားတွေ ဘာမှမပါဘူး။ ဒါကြောင့် တနိုင်းမှာဖမ်းခဲ့တာ”ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ တရုတ်နိုင်ငံသားများကို လ.၀.က အက်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူနိုင်သော်လည်း ပြည်နယ်အစိုးရအ ဖွဲ့၏အဆုံးအဖြတ်ကို စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား ငါးဦးကိုမူ အလားတူဥပဒေမှ တရား မ၀င်ပို့ဆောင်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါတာဝန်ရှိသူက အသိပေးသည်။ယင်း ဖြစ်စဉ်ကို ကချင်ပြည်နယ်၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်သိန်းက ယမန်နေ့ကတည်းက မဇ္ဈိမကို အသိပေးထားသည်။
သို့သော် ယင်းတရုတ်နိုင်ငံသားတို့ကို မည်သို့အရေးယူမည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးသို့ ယနေ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း အချိန်မီပြန်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ထို့ပြင် ရန်ကုန်ရှိ ရန်တုန်ကုမ္ပဏီရုံး သို့လည်း မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း မန္တလေးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ မိုးထိမိုးမိ ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ကွက်များအတွင်း တရားမ၀င်လုပ်ကိုင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့ကိစ္စ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မဇ္ဈိမ၏မေးမြန်းမှုကို မန္တလေးရှိ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက စကားပြန်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည် ဖြေ ကြားသည်။
at 12/20/2013 10:31:00 AM No comments:
အချိန်ကတော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ထဲမှာပါ။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ န.ယ.က အတွင်းရေးမှူး(၁)တာဝန် ယူထားရပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်က ဦးစိုးဝင်းပါ။
ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတစ်ဖွဲ့လုံး ရှင်းပြီးကာစအချိန်ပေါ့။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ကျန်းမာရေးကလည်း တော်တော်လေးမကောင်း၊ သူရဲ့ အထက်/ဘေး/အောက်ကလူတွေ လုပ်ဆောင်ပုံ ကလည်း သူ့ခံယူချက်၊ သူ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ အစပ်အဟပ်မတည့်ဆိုတော့ အင်မတန်စိတ်ညစ်ပြီး အနား ယူဖို့ စိတ်ကူးပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်က နားဖို့စိတ်ကူးပြီဆိုတော့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းကလည်း ရှေ့ဆက်မယ့်ဘဝခရီးမှာ မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် အကြံထုတ်ရတော့တာပေါ့။ တပည့်တချို့နဲ့ တိုင်ပင်မိတဲ့အချိန်မှာ အန်တီကြီးက သူ မုန့်ဟင်းခါးတော့ ချက်တတ်တယ်။
ရှမ်းခေါက်ဆွဲချက်မယ့်သူ တစ်ယောက်လောက် ထပ်ရှာမယ်။ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းထဲမှာ ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်း လချုပ်နဲ့ငှါးပြီး ဆိုင်ဖွင့်မယ်လို့ အကြံရပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကတော့ ရီနေကြမယ်ထင်တယ်။ ဦးသိန်းစိန်မိသားစု အဲဒီလောက်ထိ အခြေအနေဆိုးပါ့မလားဆိုပြီး။ ဒီမှာကိုယ့်လူ ... ခင်ဗျားသိအောင် ပြောပြမယ်။
ဦးသိန်းစိန်ဟာ တြိဂံဒေသ တိုင်းမှူးက လာတာ။ တိုင်းမှူးတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်အထိ လုပ်နိုင်သလဲဆိုရင် ကျောက်စိမ်းဒေသ မြောက်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ တိုင်းမှူးဟောင်းတစ်ယောက်ဟာ ရန်ကုန်ကသူ့အိမ်ကြီးမှာ ကျောက်စိမ်းပြားတွေကို တအိမ်လုံးအပြည့် ကပ်ထားတယ်ဗျ။ ဦးသိန်းစိန်ကိုင်ခဲ့တဲ့ တြိဂံဒေသတိုင်းဟာ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရော၊ ဘိန်းရော၊ စိတ်ကြွဆေးရော စုံလို့ ... စုံလို့ ... ။ တိုင်းမှူးပြီးတော့ န.ယ.က အတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာသေးတယ်။ သူဖြတ်သန်း ခဲ့တဲ့ နေရာတွေဟာ သူသာစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ဘာမှ လုပ်နေစရာမလိုဘူး။ မျက်နှာလေး လွှဲထား လိုက်ရုံပဲ။ သဘောပေါက်။
ဒါပေမယ့် ဦးသိန်းစိန်ဟာ အဲဒီလိုစိတ်မျိုး အရင်ကလည်း မရှိခဲ့၊ နားတော့မယ့် ဆဲဆဲ မှာ လည်း ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို တသက်လုံးပေါင်းလာတဲ့ အန်တီကြီးက သိလို့ အခုလို မုန့်ဟင်းခါး ရောင်းဖို့ စိတ်ကူးရတာပေါ့။ အန်တီကြီးရဲ့အကြံ ဘာကြောင့်အကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် ဘရွှေကြီးက ခွင့်မပြုတာနဲ့ ဦးသိန်းစိန်ဟာ မနားလိုက်ရပါဘူး။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးဟာလည်း ဒါပါပဲ။
သိပ်မကြာသေးခင်က အဖြစ်လေးကိုလည်း ကြားမိလိုက်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကလေးဆေးရုံမှာ လာတက်တဲ့ကလေးကို ဆေးရုံဆင်းသွားမှပဲ သမ္မတကြီးရဲ့မြေးမှန်း သိလိုက်ကြတယ်ဆိုတာလေ။ လူသိပ်မသိလိုက်တဲ့ အဖြစ်လေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာ သမ္မတကြီးနဲ့ ဝန်ကြီးတချို့ လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ရောက်လာကြတယ်။ လူကြီးတွေအကုန်လုံး လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်း၊ လာကြိုတဲ့ကားတွေနဲ့ အလျှိုအလျှို ထွက်သွားပြီးမှ သမ္မတကြီးရဲ့သမီးဟာ ကလေးချီပြီး လေယာဉ်ပေါ်က ကုပ်ကုပ်ကလေးဆင်း၊ နောက်ဘက်ကနေ တိတ်တိတ်ကလေး ထွက်သွားရတယ်။ ဒါတောင် သမ္မတကြီးက ကလေးငယ်ငယ် ကားနဲ့ဆင်းရင် ပင်ပန်းမှာကို သနားလို့ လိုက်ခွင့်ပြုပြီး ပါလာတာ။ အဲဒီကလေးကြီးပြီဆိုရင် အခုလို လိုက်ရဖို့ မမြင်ဘူး။
ကျွန်တော်ဟာ ဒီအကြောင်းတွေကို သိထားပေမယ့် ချရေးစရာ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်လည်းမရှိ၊ နာမည်ဝှက် (Fake Account)ကလည်း မရှိတာနဲ့ အများသိအောင် ထုတ်မပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ... ရှိနေတုန်းမှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတာလေးတွေအပေါ် ချစ်သင့်တယ်ထင်လို့ အခုလို အလျဉ်းသင့်တဲ့နေရာက တင်ပြရတာပါ။ ခင်ဗျားတို့ကတော့ ထင်မယ်။ ဒီကောင် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ တပည့် ဖော်လံဖားထဲက ဖြစ်မယ်ပေါ့။ တပည့်မဟုတ်ရပါဘူး။
သူတို့မိသားစုနဲ့ တစ်ခါမှ မပတ်သက်၊ မဆက်ဆံဘူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေကို ဖော်လံဖားနေတယ် အပြောခံရရင်တော့ ခံနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျတဲ့ သူတွေအောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖားခဲ့/ပြားခဲ့ရသေးတာပဲ။
ကဲ... မိတ်ဆွေ။ တကယ်လို့ အန်တီကြီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းသာ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းဖြစ်ခဲ့ရင် ခင်ဗျား သွားစားမလား။ ကျွန်တော်ကတော့ သွားမယ်။ ဒီလောက် စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ် ကောင်းတဲ့သူတွေ ချက်တာပဲ ... ထည့်ရမယ့် အမယ်တွေကို ဘယ်ဟာမှ ခိုထားမှာ မဟုတ်ဘူး။ စေတနာဆိုတဲ့ အမယ်ကလည်း ပမာဏအများကြီးပါဦးမှာ။ အဲဒီဆိုင်သာ ဖွင့်ခဲ့ရင် ခင်ထွေးရီတို့၊ မြောင်းမြဒေါ်ချိုတို့တောင် ဒေဝါလီ ခံသွားရဦးမယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အကြော်နှစ်ခုလောက်ထည့်ပြီး အိုးဘဲဥ၊ ငါးဖယ်နဲ့ ကျကျနန စားပစ်မယ်။ ဟင်းရည်ကိုလည်း တစ်ပန်းကန်အပြည့်တောင်းပြီး သောက်ပစ်မယ်။ ပြီးရင် မီးဖိုချောင်ထဲအထိ ဝင်သွားပြီး ဟင်းရည်အိုး ကူမွှေပေးလိုက်ဦးမယ်။ ခင်ဗျားအနေနဲ့လည်း မီးဖိုထဲထိ မလိုက်ချင်ရင်တောင် မုန့်ဟင်းခါးကိုတော့ အားပေးချင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
copy from - We Love True
at 12/20/2013 10:18:00 AM No comments:
မလေးရှား ကွာလာလမ်ပူ ကန်ပုန်းပန်ဒန်း ယာဉ်မတော်တစ်ဆဖြစ်မှုတွင် ၆ ဦးသေဆုံး မြန်မာအမျိုးသမီး ၂ဦးပါဝင်
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ ကန်ပုန်းပန်ဒန်း အဝိုင်းအနီး၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် မနက် 12.42am အချိန်တွင် မြန်မာ အမျီုးသမီး နှစ်ဦးစီးနှင်းလိုက်ပါလာသည့် နီဆန်း စကိုင်းလိုင်း ကားတစ်စီး မှာမော်တော်ယာဉ် ဘယ်နှင့်ညာ ယာဉ်ကြောကိုပိုင်းခြားထားသည့် အုတ်တံတိုင်းနှင့်တိုက်မိပြီး မီးလောင်ကျွမ်းသဖြင့် သေဆုံးသွားကြောင်း New Straits Times သတင်း အရသိရပါသည်။
ယာဉ်မောင်းသူမှာ အသက် ၄၀ နှစ်အရွယ် ဗြိတိသျှနိုင်ငံသား Simon John Hall ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့နှင်အတူဖီလိပိုင် အမျိုးသမီး ၃ဦးလည်း သေဆုံး သွားပါသည်။
မြန်မာ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးမှာ ပီးပီး ၂၀ နှစ် နှင့် အက်စတာဆွီး ၂၆ နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
ပူဒူးနှင့် ဟန်တွာ့ မီးသတ်စခန်းမှ မီးသတ်ယာဉ် ၁၃ ဖြင့် တစ်နာရီခန့် ငြိမ်းသတ်လိုက်ရကြောင်း ၊ သေဆုံးသူများ၏ အလာင်းများမှာ ခွဲခြား မရနိုင်သည်အထိ လောင်ကျွမ်းသည်ဟု
မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ Deputy Superintendent Abdullah
chinlandguardian သတင်းတွင်ဖော်ပြချက် အရ သေဆုံးသွားသူ မြန်မာ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး မှာ ညစာ စားသောက်ရန်
ဖိတ်ကြားခံရပြီး အိမ်သို့မရောက်နိုင်သဖြင့် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ Sonera Tinpar ကဖုန်းအကြီမ်ပေါင်းများစွာ ခေါ်ဆိုသည့်နောက် ရဲတပ်သားတစ်ဦးက ဖုန်းကိုင်ကာဆေးရုံသို့လိုက်လာရန် အကြောင်းကြားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
သေဆုံးသည် အက်စတာဆွီးမှာ ၂၀၁၃ ခရစ်မတ်ရက်အတွင်း တတိယနိုင်ငံ ထွက်ခွါမည့်ရက်ကိုစောင့်ဆိုင်နေသူဖြစ်သည်ဟုလည်း chinlandguardian သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
at 12/19/2013 09:37:00 PM No comments:
at 12/19/2013 09:36:00 PM No comments:
အစိုးရနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့စည်းတွေကို အစိုးရက ကားပါမစ်တွေချပေးတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အပြင်လောကမှာပြောနေတဲ့ အရေအတွက်ဟာ တကယ်ရရှိတဲ့ အရေအတွက်ထက် ပိုများနေတယ်လို့ KNU အဖွဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ Business Alliance Hotel မှာ ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်က ဒီနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြီး ပြောခဲ့တာပါ။ အစိုးရကအဖွဲ့စည်း ၁၄ ဖွဲ့ကို ကားတင်သွင်းခွင့်ပါမစ်ချပေးခဲ့ရာမှာ အစီးရေ ၂၉၀ သာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရပြီး၊ အစီးရေ ၅၈၀ အတွက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ပေးဆောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ အခုလို ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ ကရင်ဆိုရင်ဗျာ အစီး ၄ဝ က အခွန်လွတ်၊ အစီး ၈၀ က ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အခွန်ဆောင်ရတယ်၊ ဥပမာ RCSS ဆိုရင် အစီး ၂ဝ က အခွန်လွတ်၊ ၄ဝ က အခွန်ဆောင်၊ အဲဒီ ၁၄ ဖွဲ့ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရကပေးတာ အခွန်လွတ်က ၂၉၀ ရှိပါတယ်၊ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ဆောင်ရတာ ၅၈၀ ရှိတယ်၊ အဲဒါကျနော်တို့ အခြေအနေမှန်ကို သိစေချင်လို့ပါ၊ ဒါတိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ကိုယ်စားပြုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်"
ကေအဲန်ယူအဖွဲ့အနေနဲ့ သူတို့ရရှိတဲ့ ကားတင်သွင်းခွင့်ကိုလည်း အဖွဲ့အစည်းရပ်တည်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရရှိတဲ့ ကားအစီးအရေအတွက် ထောင်ကျော်ရှိနေကြောင်း ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးသားဖေါ်ပြနေကြတာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်က ပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် လတ်တလောလိုအပ်ချက်တွေဟာ အခုရရှိနေတာနဲ့တင် မလုံလောက်သေးကြောင်းလည်း သူကပြောပါတယ်။
at 12/19/2013 09:34:00 PM No comments:
at 12/19/2013 09:32:00 PM No comments:
at 12/19/2013 04:38:00 PM No comments:
ABSDF မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီတွင် ထုတ်ပြန်မည်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကျောင်းသားများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှု စုံစမ်း ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အပြီးသတ် ထုတ်ပြန်မည် ဖြစ်ကြောင်း ABSDF အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှု ဖော်ထုတ်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ကျော်လင်းက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အပြီးသတ်မည်ဟု ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသော်လည်း အချက်အလက်များ ပိုမို မှန်ကန်မှု ရှိစေရန် ၂၀၁၄ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ ထုတ်ပြန်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
“အဲဒီအချိန်တုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ သူတွေကို ဆက်သွယ်ပြီးတော့ အချက်အလက် အမှန်တွေကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ABSDF မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားများ သေဆုံးမှုအတွက် အချက်အလက်များကို ပြန်လည် အတည်ပြုရာတွင် ABSDF မြောက်ပိုင်း ရဲဘော်ဟောင်း အချို့မှာ ဆက်သွယ် မရသောကြောင့် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရန် ကြန့်ကြာနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှု ဖော်ထုတ်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာကို ရေးသားပြီးပါက သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရသူများအတွက် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသံခဲက သြဂုတ်လ အတွင်းက ပြောကြားထားသည်။
ထို့ပြင် ABSDF မြောက်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့် ကျောင်းသား ရဲဘော် ၁၅ ဦး သေဆုံးမှုကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် အထူးစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့နှင့် အထူးတရားရုံး ဖွင့်လှစ်ရေး နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တောင်းဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းများ အဖွဲ့က နိုဝင်ဘာလ အတွင်းက ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသည်။
အဆိုပါ ကျောင်းသားများ သတ်ဖြတ်ခံရမှုအတွက် ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော်နှင့် ရဲဘော် ဦးစိန်တို့၏ မိသားစုဝင်များက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းများ အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ABSDF ကျောင်းသား ရဲဘော်များကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်း သတ်ဖြတ်မှုများတွင် နစ်နာခဲ့သူများအတွက် သမိုင်းမှတ်တမ်း အစီရင်ခံစာ ပြုစုရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ABSDF အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှု ဖော်ထုတ်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 12/19/2013 04:36:00 PM No comments:
at 12/19/2013 04:25:00 PM No comments:
ထိုင်းနိုင်ငံ အိမ်ရှေ့မင်းသား၏ ကြင်ယာတော် တာချီလိတ်သို့ လာရောက် ဘုရားဖူး
ယနေ့ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၁၉)ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အိမ်ရှေ့မင်းသား မဟာဝချိရာလုံကွန်၏ ကြင်ယာတော် ဆရီရတ်မင်းသမီး နှင့် မိသားစုဝင်များ၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များအပါအ၀င် ထိုင်းနိုင်ငံ တပ်မတော်(ကြည်း) စစ်ဦးစီးအရှိများ၊ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉၂)မှ သင်တန်းနည်းပြများနှင့် သင်တန်းသားအရာရှိများ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့သည် မယ်ဆိုင်မြို့မှတဆင့် ထိုင်း-မြန်မာ အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှ တာချီလိတ်မြို့သို့ လာရောက်၍ တာလော့ဈေးအတွင်း လှည့်လည် လေ့လာကြည့်ရှုခြင်းနှင့် တာချီလိတ်ရွှေတိဂုံစေတီတော်အား ဖူးမျှော်ကြည်ညိုခြင်းအပြင် နဂါးနှစ်ကောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ဖူးမျှော်ကြည်ညို၍ အဆိုပါ နံနက်ပိုင်းမှာပင် တာချီလိတ်မြို့မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသည်။
ဦးစွာပထမ ထိုင်းနိုင်ငံ တပ်မတော်(ကြည်း)မှ စစ်ဦးစီးအရှိများ၊ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉၂)မှ သင်တန်းနည်းပြများနှင့် သင်တန်းသားအရာရှိများ စုစုပေါင်း ( ၁၄၂ )ဦးတို့က ရောက်နှင့်နေကာ တာလော့ဈေးအတွင်း လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး တာချီလိတ်ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ အိမ်ရှေ့မင်းသား၏ ကြင်ယာတော် ဆရီရတ်မင်းသမီး နှင့် မိသားစုဝင်များ ပါဝင်သော လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များ စုစုပေါင်း (၉၉)ဦးတို့သည် နံနက်(၁၀း၃၀)နာရီအချိန်မှာ တာချီလိတ်သို့ ၀င်ရောက်လာရာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ စစ်ဘက်၊ နယ်ဘက် နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ဆက်လက်၍ တာချီလိတ်ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ အဆိုပါအဖွဲ့မှ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။
တာချီလိတ်ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ တပ်မတော်(ကြည်း) စစ်ဦးစီးအရှိများ၊ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉၂)မှ သင်တန်းနည်းပြများနှင့် သင်တန်းသားအရာရှိများမှ ကြင်ယာတော် ဆရီရတ်မင်းသမီးအတူ အမှတ်တရဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍ ကြင်ယာတော် ဆရီရတ်မင်းသမီးသည် ရွှေတိဂုံစေတီတော်အား တပတ် ပတ်၍ ဖူးမျှော်ကာ ကြာသာပတေးထောင့်တွင် ပန်း၊ ဆီမီး၊ အမွှေးနံ့သာတိုင်များ ထွန်းညှိပူဇော်ကန်တော့ပြီး ဓမ္မာရုံ၌ နဂါးနှစ်ကောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ဖူးမျှော်ကြည်ညိုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့တို့သည် နံနက် (၁၁း၁၀)နာရီအချိန်တွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပေါ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီး အမှတ်(၁) ချစ်ကြည်ရေးတံတားအနီးရှိ ရွှေနန်းတော်ကုန်တိုက်အတွင်း ၀င်ရောက်၍ အချိန် (၃၅)မိနစ်အကြာ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုလာရောက်သော အဖွဲ့သည် တာချီလိတ်မြို့တွင် ယခုလထဲ၌ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော နဂါးနှစ်ကောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မွေးနေ့ပူဇော်ပွဲသို့လည်း ထပ်မံ၍ လာရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သေးသော ပြောစကားအရ သိရှိရသည်။
at 12/19/2013 04:23:00 PM No comments:
at 12/19/2013 01:59:00 PM No comments:
“မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တနာ နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း”
at 12/19/2013 01:57:00 PM No comments:
၁၉.၁၂.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၀၂၃၀အချိန် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ သူရလမ်း၊ အမှတ်(၉၀)၊ ဒေါ်ခင်သန်း၏နေအိမ်အောက်ထပ်တွင် ငှားရမ်းနေထိုင်သူ မျိုးမြင့်အောင်သည် နေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်း၌ လျှပ်စစ်မီးပူအား မီးပလပ်ထိုးထားရာမှ အပူလွန်ကဲကာ အနီးရှိ အကြော်ကြော်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် ပွဲအိတ်များအားမီးကူးစက်ေ
လောင်ကျွမ်းခဲ့သဖြင့် နေအိမ်အပါအ၀င် အခြားအိမ်ခြေ(၁၅)လုံး
အဆိုပါမီးလောင်ရာနေရာသို့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဝင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ၀င်းနိုင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သူရ၊ ဒုတိယတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဒုရဲမှူးကြီး စိုင်းဝင်းအေး၊အကူတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူး ဒုရဲမှူးကြီး မျိုးမင်းဦးနှင့် အနောက်ပိုင်းခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
တို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးကြည်ဝင်းဦးစီကာ မီးသတ်ဦးစီး
ဌာနမှ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် (၂)စီး၊ အထောက်အကူပြုယာဉ် (၄)စီး၊ မီးသတ်ယာဉ်(၅၀)စီးဖြင့် ရောက်ရှိမီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ပြီး ၀၃၂၅အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ကာ မီးလောင်မှုကြောင့်တန်းဘိုးငွေကျပ် (၇၃)သိန်းခန့်
ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်စု (၄၅)စု၊ လူဦးရေးစုစုပေါင်း (၂၀၈)ဦး အိမ်းမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကာ မစိုးရိမ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ ဓမ္မာရုံတွင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့ရသောကြောင့် မီးပေါ့ဆစွာအသုံးပြုသူ မျိုးမြင့်အောင်အား မရမ်းကုန်းမြို့မရဲစခန်း(ပ)၅၁၉/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၂၈၅ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 12/19/2013 01:55:00 PM No comments:
တောင်အာဖရိမှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုတဲ့ ကွန်ဒုံးတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို ကွန်ဒုံးရဲ့ထူးခြားချက်က အတွင်းမှာ ခွေးသွားစိတ်တွေ တပ်ဆင်ထားတာပါပဲ။
ဒီ ကွန်ဒုံးကို Rape-aXe လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့ အမျိုးသားများဟာ ထိုနေရာကိုမိမိ လိင်အင်္ဂါ ထည့်သွင်းမိတဲ့ အခါ ခွေးသွားလို အချွန်တွေနဲ့ စူးနေမှာဖြစ်ပြီး ခွဲစိတ်မှသာ ပြန်လည် ထုတ်ပစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
at 12/19/2013 01:54:00 PM No comments:
(၂၇) ကြိမ်မြောက် အရှေတောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၂၂ - ၁၂ - ၂၀၁၃ ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ နာရီ အချိန်မှ အခမ်းအနားပြီးဆုံးချိန်အထိ နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိအားကစားကွင်း ဧရီယာသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် အောက်ပါနေရာ လမ်းဆုံရှစ်ခုတွင် ခေတ္တ လမ်းပိတ်ထားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေ ညာအပ်ပါသည်။
(၁) ပျဉ်းမနား - တောင်ညိုလမ်းနှင့် ဥာဏအောင်မြေလမ်းဆုံ (စိုးစံလမ်း ထိပ်)
(၂) မြရည်နန္ဒာလမ်းနှင့် မဏိစန္ဒာလမ်းဆုံ (ဆွာလမ်းဆုံအနီး)
(၃) ဇေယျာအောင်မြေလမ်းနှင့် မဏိန္ဒာလမ်းဆုံ (အထက - ၁၁ ထိပ်)
(၄) မဏိစန္ဒာလမ်းနှင့် ဂိတ် (၅) ထိပ် လမ်းဆုံ (ဂိတ် ၅ ထိတ်)
(၅) ဇေယျာအောင်မြေလမ်းနှင့် မဏိစန္ဒာလမ်းဆုံ (အားကစားရွာထိပ်)
(၆) ပျဉ်းမနား - တောင်ညိုလမ်းနှင့် V4 လမ်းဆုံ (နေပြည်တော် မြို့ပတ် လမ်းဆုံ )
(၇) ဇေယျောအောင်မြေလမ်းနှင့် နန်ချွန်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်းဆုံ
(၈) မဟာဇေယျာလမ်းနှင့် ဇေယျဗလ လမ်းဆုံ (ခရေအိမ်ရာထိပ်)
at 12/19/2013 11:48:00 AM No comments:
ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်စန္ဒာမင်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)ကို Popular Myanmar News Journal မှ မ င်းသုအောင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်။
နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ ဒီလိုမျိုးဆီးဂိမ်း မလုပ်နိုင်တာက နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော် ကြာပြီ။ နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ကြာမှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ပြီးအခုလို ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပလာနိုင်တာကို နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့အမျိုးသား ရေးအမြင်နဲ့ ကြည့်ရင်ကျွန်မတို့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အခုလိုကျင်းပနိုင်တာက တရုတ် နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုယူပြီး လုပ်တယ်။ ဒါတွေက တစ်ချိန်ကျရင် တစ်ဖက်က အခွင့်အရေးတွေ ယူလာနိုင်တယ်။ ပြန် ပေးဆပ်ရမယ်။ ဒီလို စိတ်ပူတာတွေရှိ နေကြသံထွက်လာတော့ ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံက နှစ်ပေါင်း အများကြီး ခေတ်နောက်ကျနေပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံက ပညာရှင်တွေနဲ့ လုပ်လို့မရဘူး။ အခြားက တတ်သိနားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေကို ဒီလိုပဲ ငှား ယူရတယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်မတို့ ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွှတ်တော်ကလည်း ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကို များတဲ့အတွက် အများကြီးတော့ သဘောမတူခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီဟာက ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်မှ ပထမဦးဆုံးလုပ်ရတဲ့အတွက်ကိုပဲ တခမ်းတနားဖြစ်ရမယ်။ ဒါ့ထက်ကို ရှေ့အလား အလာကိုအများကြီးကြည့် ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို ထည့်မတွက်ဘဲ လုပ်ခဲ့ကြ တာဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ တရုတ်ပညာရှင်ပဲလုပ်လုပ်၊ အမေရိကန် ပညာရှင်ပဲလုပ်လုပ် ကုန်ကျ စရိတ်ကိုပေးပြီးလုပ်ခိုင်းတာပါ။ အလကားလုပ်ခိုင်း တာမဟုတ်ပါဘူး။ စေတနာလည်း သူတို့ဘက်က ပါတာပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ အတွက် ရှေ့မှာ အကျိုးအမြတ် ထုတ် စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
ဒီဆီးဂိမ်းကုန်ကျစရိတ်က အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ချီပြီးကုန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာ လိုအပ်ချက် တွေရှိနေတယ်။ ဒါကိုေ တာ့ မဖြည့်ဘဲ ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး လုပ်နေကြတယ်ဆို တဲ့ တစ်ဖက်မှာလည်း ဝေဖန်သံတွေ ထပ်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါကိုရော ဘယ်လို မှတ်ချက်ပြုလိုပါသလဲ။
ဟုတ်ပါတယ်။ အိမ်တစ်ခု၊ မိသား စုတစ်ခုအနေနဲ့ မြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်အထွေထွေ အိမ်စရိတ်ကို တစ် နေ့ ကျပ် ၃ဝဝဝ လို့ သတ်မှတ်ထားပေ မယ့် ရုတ်တရက် ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်း က မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခု ကျင်းပလိုက် မယ်လို့ရှိလာရင် ကျပ် ၅ဝဝဝ လက်ဖွဲ့မှ သင့်တော်တယ်လို့ ဒီနေရာမှာ သတ် မှတ်လိုက်ရင်ငွေ ၅ဝဝဝ ကို သုံးမှာပဲ။ တစ်ခါတလေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် မမျှော်လင့်ဘဲ သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေ ရှိလာရင်သုံးရမှာပဲ။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာ ရေးကို သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးက မှန် ပါတယ်။ ဒီပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးက ရေရှည်စီမံကိန်းပါ။ အခုဟာက တစ် ခဏအတွင်းမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ သုံးလိုက် ရတဲ့ပိုက်ဆံပါ။ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး တိုးတက်သွားဖို့ကို နှစ်ရှည် စီမံကိန်း ချပြီး လုပ်ရမှာဖြစ်သလို ခုဟာက တိုင်းပြည်ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကို ပြရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် အခု ကုန်ကျစရိတ်တွေက သုံး သင့်သုံးထိုက်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေပါ။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ခုချိန်မှာက လယ်ယာမြေပြဿနာတွေ၊ မပြည့်စုံတဲ့ အတွက် ဆန္ဒပြမှုတွေ ဒါတွေရှိနေရဲ့ သားနဲ့ မပြေလည်သေးဘဲနဲ့ ဒီပွဲကြီး ကျင်းပနေတယ်။ လိုအပ် ချက်တွေ မပြည့်စုံဘဲကျင်းပနေတာကို လွှတ်တော် ရော အစိုးရကပါ နစ်နာနေတဲ့ ပြည်သူ ကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတာလား၊ ဒီလိုရော ဖြစ်မနေဘူးလား။
ဒါက မဆိုင်ဘူး။ နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံ တိုင်းမှာ အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့ နေတာ မရှိဘူး။ ချောမွေ့နေတဲ့ တိုင်း ပြည်လည်းမရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံ တိုင်းမှာ နိုင်ငံရေး၊ စီး ပွားရေး၊ လူမှုရေး ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လည်း အဲဒီပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေ ကြတဲ့အခါမှာ တိုင်းပြည်က လူတွေက စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်၊ အဲဒီလို ပြဿ နာ တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုမျိုး ကြီးပဲ သွားမလား။ အဲတော့တစ်နည်း အားဖြင့် ဆီးဂိမ်းကြီးကို ကျင်းပလိုက် ခြင်းအားဖြင့် နံပါတ်-၁ အမျိုး သားရေး စိတ်ဓာတ်တွေ တက်ကြွလာခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြန်မာ ဆိုတာကို ဂုဏ်ယူလာခဲ့တယ်။ အကောင်းဘက်က ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဒါတွေရှိတယ်။ ဆီးဂိမ်းကြီး ကို နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ မကြည့်ဘဲနဲ့ အားကစားအမြင် အမျိုး သားရေးစိတ်ဓာတ်အမြင်နဲ့ ကြည့်လိုက် ပါ။ ပြဿနာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ များ များ၊ ပြဿနာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ရင်ဆိုင်နေရနေရ၊ တစ်ချိန်က ကမ္ဘာမှာ မြန်မာက အောက်ကျနောက်ကျ ရှိခဲ့ရ ပေမယ့် ခုချိန်မှာ ကျွန်မတို့က ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ မြန်မာဟေ့လို့ ဝံ့ဝံ့ကြွား ကြွား နဲ့ ထုတ်ပြနိုင်တာကိုက အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်အမြင်နဲ့ ကြည့်ရင် အကောင်း ဘက်ကပါပဲ။ ပြဿနာတွေကအမြဲတမ်းပဲ ရင်ဆိုင်နေရမှာပါပဲ။ ဒါကို အုပ် ချုပ် ရေး ပိုင်းက လမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ ဖြေ ရှင်းလုပ် ဆောင်သွားရပါမယ်။ တစ်ဖက် ကလည်း ပြည်သူလူထုကို စိတ်ဓာတ် တက်ကြွလာအောင် လုပ်ပေးရပါလိမ့် မယ်။ လို လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အစ်မက ဒီလိုအကုန်အကျခံခြင်းဟာ အကျိုးမယုတ်ဘူး။ တစ်ဖက်က ပြန်ရနိုင်တယ်လို့ ဒီသဘောပြောခဲ့တော့ ဘာတွေပြန်ရမှာလဲ။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာက ဘယ်လိုမြင်နေလဲ၊ ဘယ်လို သဘောထားနေလဲ၊ အင်မတန်မှ နုံချာနေတဲ့ တိုင်းပြည်၊ ဆင်းရဲနေတဲ့ တိုင်းပြည် တော်တော်လေး စုတ်ပြတ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်လို့ မြင်နေကြတယ်လို့ထင်နေကြတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဆိုတာ နဲ့ တော်တော်လေးညံ့ဖျင်းတယ်လို့ဆို တဲ့အမြင်တွေကို နံပါတ် တစ်ဖြေဖျောက် နိုင်တယ်။ ဒီလို ခမ်းခမ်းနားနားကြီး ကျင်းပခြင်းအားဖြင့် ငါတို့ဟာ အထိုက် အလျောက် လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြနိုင်တယ်။ ခုပွဲကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာတွေ ဆိုတာ မညံ့ဘူး။ သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်လို့ရတယ်လို့ ဒီလို အမြင်တွေ ရှိခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးပိုင်း စတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ ယုံကြည်စွာနဲ့ ပူးပေါင်းလာမယ်။ ဒီရလဒ်တွေ ရှိ လာနို င်ပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာ ပုံရိပ်ကောင်းရနိုင်ဖို့ ဒီပွဲကိုကျင်းပတာလို့ ပြောကြပြန်တယ်။ ဒါကိုရော ဘာပြောလိုပါသေးလဲခင်ဗျ။
ကျွန်မတစ်ခု ပြောပါ့မယ်။ ကျွန်မတို့က အတိုက်အခံပါတီပါ။ အတိုက်အခံဆိုတာက အစိုးရလုပ်တိုင်း အတိုက်အခံလိုက်လုပ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့က အစိုးရရဲ့ ပျော့ကွက်၊ မှားကွက် ရှိတာကို ထောက်ပြဝေဖန်ပြရမယ့် ပါတီပါ။ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို လည်းကောင်းတယ်လို့ ပြောရမယ့် ဝတ္တရားရှိပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် သမ္မတ ဖြစ်လို့ ဒီပွဲကြီးပဲလုပ်လုပ်၊ ကျွန်မတို့ ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ သမ္မတ ဖြစ်လို့ လုပ်လုပ် ဒါကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် အလုပ်ဆိုရင် မည်သည့်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရမှာပဲ။ တာဝန်ကျလာတယ်ဆိုရင် အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာက သူ့တာဝန်ပဲလေ။ ဒါဆိုကျွန်မတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်မှ ဒီပွဲလုပ်တာကို အားပေးရ မှာလား။ ဦးသိန်းစိန်လုပ်လို့ အားမပေးရတော့ဘူးလား။
ဟုတ်ကဲ့ တချို့ကလည်းဒီလို ကျင်းပတာကို ခါးခါးသီးသီးနဲ့မကြိုက်ချင်ကြဘူး။ ဒီအပေါ်မှာ မှတ်ချက်ထပ်ပြု ပေးပါဦး။
အပြစ်ပြောတဲ့သူတွေကို ကျွန်မ အပြစ်မမြင်ပါဘူး။ လူတွေက ခုချိန်မှာ အထူးသဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်း လယ်သမားတွေ ဖိနှိပ်ခံနေရတယ်။ အထူး သဖြင့် အောက်ခြေ မှာ တကယ့်ကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ကြတဲ့သူတွေကြောင့် တောင် သူတွေ စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်။ ဒါကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ နားလည်းလည် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကို အမျိုးသားရေး အမြင်နဲ့ကြည့်ရင် အဖြေကတစ်မျိုး ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
ွှThe Popular News ဂျာနယ် No.50, Vol.5 ပါ မိုးယံထက် လွင့်ပျံတက်လာသော ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ လက်ခုပ်သံနှင့် ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ် မှ ကောက်နှုတ်ကူးယူဖော်ပြသည်
at 12/19/2013 11:41:00 AM No comments:
စုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLDအနေနဲ့ ဘာကြောင့်အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။ ပြည်သူတွေကိုစုစုဝေးဝေး လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ် သိက္ခာချပွဲတွေ ကျင်းပနေရပါသလဲ…ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပြည်သူတစ်ဦးအနေ နဲ့မေးချင်ပါတယ်။ ဒီလိုမေးချင်တာအကြောင်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေပျက်ပြားပြီးဆင်းရဲသားတွေရဲ့မကျေနပ် မှုတွေပေါက်ကွဲကုန်မှာစိုးရိမ်လို့ပါပဲ။ လူတွေ စုပြုံပြီး လမ်းပေါ်ရောက်လာခဲ့ရင် ချမ်းသာလှတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့ မသိသာလှပေမယ့် ဆင်းရဲနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ အဖို့တော့ စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမေးခွန်းကို မေးချင်တာပါ။
၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘက်ကနေလိုက်ပြီး အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၀၈ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လွှတ်တော်ကနေ ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်နေဆဲမို့ စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ အနေအထားမှာပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်ခန်းစာယူမယ်ဆိုရင်အများကြီးပါပဲ။ ၁၉၈၈ခုနှစ် ကနေ အနှစ်(၂၀)ကျော်လုံးလုံး စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်သွားတာဟာ တကယ့်တရားခံ အစစ်က ဆန္ဒတွေစောခဲ့လို့ပါပဲ။ လုပ်သင့်တာကိုမလုပ်ခဲ့ဘဲ ဆန္ဒတွေစောခဲ့လို့ အဲဒီတုန်းက သမ္မတက(၃)လအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေး မယ်။ သူတို့အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးဝင်ပြီး အရွေးမခံဘူးဆိုပြီး ကတိပေးခဲ့တာကို လက်ခံသင့်ပါလျက်နဲ့ လက်မခံဘဲ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆိုးလာ တာကြောင့် စစ်တပ်က နေရာရသွားခဲ့တာပါ။
အဲဒီတုန်းကသာ အာဏာရအစိုးရက ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးချခဲ့ရင်အခုဆိုရင် ဒီမိုကရေစီရတာနှစ်ပေါင်းအစိတ်ကျော်ပါပြီ။ ဒါဟာသင်ခန်းစာ ယူသင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။ ပေးပါ့မယ်ဆိုတာ ကိုမရဘူး..အခုချက်ချင်းပေးလို့ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အမှားကြောင့် အနှစ်(၂၀)ကျော်လုံးလုံး ဒီမိုကရေစီမရခဲ့တာ ပါပဲ။အခုလဲ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေလုပ်ကိုင်နေတာ လေးကို NLD အနေနဲ့စောင့်ကြည့် သင့်ပါတယ်။ အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူတွေ စုစုဝေးဝေးနဲ့ ဆူဆူ ပူပူဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။လွှတ်တော်ကလဲပြင်ဆင်မယ်၊ပြည်သူတွေကလဲ ပြင်ချင် တယ်ဆိုရင် ပြင်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။
NLD အဖွဲ့အနေနဲ့ငွေကြေးအမြောက်အမြားအကုန်အကျခံပြီး အလံတွေလုပ်၊ဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်၊ လူထုတွေစုဝေးခိုင်းပြီး လုပ်နေတာဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရယင် အပိုအလုပ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကိုရောက်ဖို့ကြားမှာ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်လုံးကျန်ပါသေးတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်လုံလုံ လောက်လောက်ရှိနေပါသေးတယ်။ NLD အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကို အကြောင်း ပြပြီးလူထုကိုမဲဆွယ်နေတာလား။ ငြိမ်သက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကို စိတ်ခံစားမှုတွေပေးနေတာလား။ ဒါတွေ ဟာမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
အခုလဲ လွှတ်တော်ကနေ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ပြင်ဆင်ရမယ့် အချက်တွေထဲကမှ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဖြေကို ရှာကြရမှာပါ။
အဲဒီကရလာတဲ့အဖြေပေါ်မူတည်ပြီးမှ NLD က ဆက်လက် လုပ်ဆောင့် သင့်ပါတယ်။ အခုဟာကတော့ စစ်မရောက်ခင် ကထဲကမြားကုန်အောင် ပစ်နေသလိုပါပဲ။ လက်ရှိ အစိုးရကလဲ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကြီးကိုမပြင်ဘူးဆိုပြီးသော့ခတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပဒေ ပြုရေးအာဏာရှိတဲ့ လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်ကလည်း မပြင်ဘူးဆိုပြီး တင်းခံနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူပေါင်း ရာကျော်ပါတဲ့ ကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးလုပ်နေပါလျက် NLDကဘာကြောင့် အရေး တကြီးလုပ်ဆောင်ချင်နေရတာပါလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုမေးချင်ပါတယ်။
From : We Love True
at 12/18/2013 04:20:00 PM No comments:
လာမယ့်နှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်ကစပြီး မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား အပြန်အလှန် ဗီဇာ လျှောက်ထားစရာ မလိုပဲ ၀င်ထွက်သွားလာခွင့် ရတော့မယ်လို့ ကမ္ဘောဒီးယားသံရုံးရဲ့ တာဝန်ရှိသူ မြန်မာအရာရှိက အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံဗီဇာ ကြိုတင် လျှောက်ထားစရာ မလိုပဲ အပြန်အလှန် သွားလာခွင့် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် သူက ခုလို ပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို သွားရောက် လည်ပတ်လိုသူတွေဟာ ဖနွမ်းပင် ဒါမှမဟုတ် ဆီရမ်ရိလေဆိပ်မှာ ၁၄ ရက် ဗီဇာရမှာ ဖြစ်ပြီး ဗီဇာကြေးလည်း ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ အလားတူ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို လာတဲ့အခါ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့ အပြန်အလှန် ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသေးတယ်။
at 12/18/2013 04:10:00 PM No comments:
ရန်ကုန် - ဗန်ကောက် နေ့ချင်းရောက် ခရီးစဉ်နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားကြီး များဖြင့် ပြေးဆွဲမည်
ရန်ကုန်- သထုံ -ဘားအံ-ကော့ကရိတ်-မြ၀တီ-မဲဆောက်-ဗန်ကောက်ခရီးစဉ်ကို Yangon Air-Bus-Taxi လိုင်းမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာ- ထိုင်း နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အမီ ပြေးဆွဲသွားရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့သို့ အဲကွန်းနှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားကြီးများဖြင့် ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်ပြီး ၁၂ နာရီကြာမြင့်မည်ဟု ဆိုသည်။
ခရီးစဉ်တစ်ခုလျှင် ခရီးသည် ၁၂၀ ဆံ့ပြီး တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ် သုံးသောင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးလျှင် US$ 40 နှုန်း သတ်မှတ်ထားကာ ယာဉ်အစီးရေ ၂၀ ဖြင့် တစ်ရက်ခြား ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနားလမ်းရှိ ကျန်းမာရေးဆိပ်ကမ်း ကားဝင်းအတွင်းမှ နံနက် ၆ နာရီတွင် စတင်ထွက်ခွာ၍ ဘားအံမြို့သို့ နံနက် ၁၀နာရီ ရောက်ရှိကာ ကော့ကရိတ်မြို့သို့ နံနက် ၁၁ နာရီ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ မြ၀တီမြို့သို့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ရောက်ရှိပြီး မဲဆောက်မြို့မှ ဗန်ကောက်မြို့သို့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ စတင်ထွက်ခွာကာ ဗန်ကောက်မြို့သို့ ညနေ ၆နာရီတွင်ေ၇ာက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
at 12/18/2013 04:05:00 PM No comments:
ဆရာကြီးတစ်ယောက်က နေပြည်တော်မှာလုပ်မယ့် ဆွေးနွေး ပွဲတစ်ခုကို လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်။ လိုက်ခဲ့ဆိုတော့လဲ လိုက်သွားတာ ပါပဲ၊ ဘာခက်တာမှတ်လို့။ သီးသီး သန့်သန့် ကိုယ့်ကိုတာဝန်ပေးထား တာမျိုးမဟုတ်ရင် မိုက်ခဲထဲမပါ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မကြာခဏ ဆိုသလို မိုက်ကိုင်ထားတဲ့သူတွေ ဆီက မိုက်ပြန်တောင်းရတဲ့ အလုပ် မျိုးတွေကို မကြာခဏလုပ်လုပ်နေ ရတယ်။
နေပြည်တော်လိုက်သွားတာ က ဆီးဂိမ်းလို့ခေါ်တဲ့ အရှေ့တောင် အာရှအားကစားပွဲကို တစေ့ တစောင်း ကြည့်ချင်တာလဲပါပါ တယ်။ တမင်သက်သက်တော့ မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဧည့်သည်ဆိုတာ က တက်ဆိုတက်၊ ဆင်းဆိုဆင်း၊ စားဆိုစား၊ အိမ်ရှင်တွေပင်ပန်းမယ့်၊ အလုပ်ပိုမယ့် အလုပ်မျိုးတွေ မလုပ် ချင်လို့မသွားတာလဲ ပါပါတယ်။အသက်ရလာတဲ့အခါ ကြည့်ရလဲ ကောင်းကောင်း၊ မကြည့်ရလဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်အခံလေး ရှိနေတာလဲပါတာပေါ့။
၁၁၅ မိုင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း လောက်ရောက်တော့ အားကစား သမားတွေကြိုမယ့် ယာဉ်တန်း ထင်ပါရဲ့။ ရန်ကုန်ဘက်ကို မောင်း လာတာတွေ့ရတယ်။ ၁၁၅ မိုင် စခန်းမှာလဲ မီးရှူးတိုင်ကြိုဆိုမယ့် စင်မြင့်ဆောက်ထားတာ တွေ့ရ တယ်။ နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန် အဝင်မှာလဲ အလံတွေတွေ့ရတယ်။ နောက်တစ်ရက် အားကစားရုံမုခ်ဦး ရှေ့က ဖြတ်သွားတယ်။ ဒီလောက် ပါပဲ။
ဆရာကြီးတစ်ယောက်က အိမ် ရှင်တွေကို သမီးမှာတဲ့ဇီးကွက်ရုပ် နှစ်ရုပ် ဝယ်ခိုင်းတယ်။ ဒါလဲ အား ကစားလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်တာပဲ လေ။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေက အပြန်မှာ ၁၁၅ မိုင်ရောက်တော့ င်္နနူ စားသောက်ဆိုင်ရှေ့မှာရောင်း နေတဲ့ တီရှပ်တွေ၊ ဦးထုပ်တွေ အားပေးကြတယ်။ ပြည်ပခရီး သွားတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက် လို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိတဲ့ အမှတ် တရပစ္စည်းပေးစရာများများစားစား မရှိဘူး။ အခုဒီပွဲမှာ အမှတ်တရ ပစ္စည်းတွေ အတော်လေးစုံလင်တာ နဲ့ပဲ သဘောကျတယ်။
ရန်ကင်းစက်မှု(၁)လမ်းပေါ် မှာတော့ အားကစားသမားတွေ ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ယာဉ်တန်း ကို မကြာခဏတွေ့ရပါရဲ့။ ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပတဲ့နေ့ကလဲကိုယ်ကတစ်နေ့ လုံး လျှောက်သွားနေတာဆိုတော့ တစ်နေရာမှာ မီးရှူးတိုင် နေပြည် တော်ရောက်တာတွေ့လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အိမ်မှာကလဲ ရုပ်မြင် သံကြားလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ ဘာမှ မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အင်တာနက်နဲ့ နောက်တစ်နေ့သတင်းစာမှာဓာတ်ပုံ တွေ၊ သတင်းတွေ၊ ဝေဖန်ချက်တွေ စုံနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အဆင် မပြေတာတွေ၊ သဘောမကျ တာတွေလဲကြားရပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် သဘောအကျဆုံး ဝေဖန်ချက်က တော့ ''ဒီပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံတံခါး ဖွင့်လှစ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ် တယ်''ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါ။
တစ်ဖက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေ တာ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ်တွေ နည်းနေတာ၊ နေပြည်တော်အားကစားကွင်းမှာ မီးရှူးမီးပန်းတွေ ပစ်ဖောက်နိုင်ပေ မယ့် တစ်နိုင်ငံလုံး မီးမလင်းသေး တာအားလုံးမှန်ပါတယ်။ ပျဉ်းမနား က ဟိုတယ်လေးတစ်ခုမှာ ခြင် တစ်ကောင်နှစ်ကောင်လောက်လာ ကိုက်တော့ အားကစားသမား တွေကိုရော ခြင်ကိုက်သလားလို့ တောင် စဉ်းစားမိလိုက်သေးတယ်။ ဒီဖွင့်ပွဲအတွက် အကူအညီယူတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလဲ ဝေဖန်ကြတာတွေ့ ရတယ်။
လုပ်စရာတွေကတော့ အများ ကြီးပါပဲ။ ဒီအထဲမှာ လုပ်သင့်တာ တွေလဲရှိတယ်။ လုပ်ချင်တာတွေ လဲရှိတယ်။ လုပ်သင့်ပေမယ့် မလုပ် နိုင်သေးတာ၊ လုပ်ချင်ပေမယ့် လုပ်လို့မရသေးတာတွေရှိတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာလဲ ဒီသဘောပဲ ထားပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် စွမ်းနိုင်သမျှ၊ နားလည်သမျှကြိုး စားလုပ်ထားတာဆိုတဲ့ အခြေအနေ ကိုသိနေတယ်။ သူတို့နားမလည် တာ၊ နားမလည်သေးတာတွေကိုလဲ ကိုယ်ကသိနေလေတော့ ထွေထွေ ထူးထူးဝေဖန်ချက်
မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဝေဖန်ချက်မပေးဘဲနေတာတောင် မှ ပြောတဲ့သူတွေရှိနေလေတော့ အချိန်က မလောက်ချင်ပါဘူး။ ဒီအားကစားပွဲနဲ့ အရင်အား ကစားပွဲတွေယှဉ်ရင် အမြင်အမျိုး မျိုးနဲ့ ပြောကြဆိုကြ၊ ရေးသားကြ၊ ဆွေးနွေးနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။
အရင်ကအစိုးရမီဒီယာကပဲတွေ့ရ မြင်ရတယ်။ တစ်ဖက်သတ်ဆန် တယ်။ အခုတော့ မီဒီယာပေါင်းစုံ ကသွားလာဝင်ထွက်၊ သတင်းတွေ တင်ဆက်ခွင့်ရကြတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံခါး ဖွင့်လှစ်တဲ့အထိမ်းအမှတ် သာမက ထူးခြားတဲ့ အသိအမြင်အသစ်တွေ၊ တိုးတက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ကွဲလွဲတဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို လက်ခံနိုင်တဲ့ သဘောထားတွေ ဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ အားကစားပွဲလဲ ဖြစ်ပါစေလို့ ကျွန်တော်ဆုတောင်း နေမိတယ်။
at 12/18/2013 04:03:00 PM No comments:
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြမှုများသည် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်များနှင့်မညီညွတ်ဘဲ အစိုးရကိုထိခိုက် စေသည်ဟုဆိုကာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ)သို့ အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း စာနယ်ဇင်းကောင်စီဘက်မှ ၀င်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးမည်မဟုတ်ဟု စာနယ် ဇင်းကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးဦးကျော်မင်းဆွေက ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“စာနယ်ဇင်းကောင်စီက ယာယီပဲဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်စုံတစ်ခုကို ဖိအားပေးခွင့်မရှိပါဘူး။ ပြန်ကြားရေးဌာ နက သူရိနေ၀န်းဂျာနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုမျိုးအကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိထားတယ်ဆိုတာကို အသိ ပေး အကြောင်းကြားစာ ပို့မှာပါ”ဟု ဦးကျော်မင်းဆွေက ပြောသည်။
သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ်ပါ ရေးသားဖော်ပြမှုများသည် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်များနှင့်မညီညွတ်သည့်အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)သို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စာနယ်ဇင်းကောင်စီသို့ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
စာနယ်ဇင်းကောင်စီမှ သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ်သို့ပေးပို့သည့် အသိပေးအကြောင်းကြားစာကို ဒီဇင်ဘာ၁၇ ရက်စွဲဖြင့် စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းကြားစာတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာ နမှ သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ်နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်ဟုလည်း ဦးကျော်မင်းဆွေက ဆိုသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် သူရိယနေ၀န်းဂျာ နယ် ထုတ်ဝေရန် လျှောက်ထားစဉ်က လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စံနှုန်းများကို လိုက်နာရန် လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ စံနှုန်းများအား ဖောက်ဖျက်လျက်ရှိသည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သူရိနေ၀န်းဂျာနယ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးမိုးဟိန်းသို့ မဇ္ဈိမက ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဖုန်းပိတ်ထားသဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားချက် မရခဲ့ပေ။ ဦးမိုးဟိန်းက မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)၊ ဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်၊ ဂျာနယ်လစ်သမဂ္ဂ စသည်တို့သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအား ကိုယ်စားပြု၊ မပြုနှင့် စာနယ်ဇင်းဝါဒ၊ ကျင့်ဝတ်၊ အက်ဥပဒေ၊ အခြေခံမူများကို မည်သူ တွေက ရွေးချယ်ထားသနည်းဟု အောက်တိုဘာလအတွင်းက မဇ္ဈိမ၏ မေးမြန်းမှုတစ်ခုတွင် ပြန်လည် မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။
မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ကလည်း သူရိယအလင်း အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်၏ ရေးသားဖော်ပြမှုများ သည် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နှင့်မညီပာု အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက် နေ့စွဲဖြင့် သဘောထားဖြင့်ကြေညာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သေးသည်။
အငြိမ်းစားယူသွားပြီဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏မြေးဖြစ်သူ နေရွှေသွေးအောင်နှင့် ပတ်သက် သည့် “မော်စကိုမှာသာတဲ့လ” ဆောင်းပါးကို သူရိယအလင်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပြီးနောက် ထုတ်ဝေသူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တို့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပေါ်ပြီးမှ သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ်အဖြစ် ထပ် မံပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
at 12/18/2013 12:34:00 PM No comments:
မန္တလေးတိုင်းရှိ မြို့နယ်လေးခုတွင် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာများ ၂၀၁၄ အပြီးသတ် ဆောက်လုပ်မည်
မန္တလေးတိုင်းအတွင်း မြို့နယ်လေးခုအတွက် ဆောက်လုပ်မည့် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် တင်ဒါ ခေါ်ယူမှုကို ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အပြီးဆောက် လုပ်သွားမည်ဟု တိုင်းမြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးကျော်ကျော်လင်းက ပြော သည်။
“လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက လွှတ်တော်မှာ တင်ပြတောင်းဆိုတဲ့အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် တင်ဒါပြန်ရွေးမယ့်နေ့က ရက်အတိအကျတော့ မသတ်မှတ်ရသေးပါဘူး။ ဒီတစ်ပတ်အတွင်း ပြန်ဖွင့်မှာပါ။ ဒေသခံမဟုတ်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ နေရာချ ထားပေးမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
အောင်မြေသာစံ၊ ချမ်းမြသာစည်၊ မိတ်္ထီလာ၊ မြင်းခြံမြို့နယ်များတွင် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ရန် ယခုလ ၆ ရက်က အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ရာ တင်ဒါလျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုခန့်ရှိသည်။ ဖော် ပြပါ မြို့နယ်လေးမြို့နယ်တွင် အိမ်ရာများကို လေးခန်းတွဲ၊ သုံးထပ် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။
အလားတူပင် လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်များတွင် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်၂၈မြို့နယ်အတွက် ၀န်ထမ်း အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း ဦးကျော်ကျော်လင်းက ပြော သည်။
မန္တလေးမြို့တွင် တာဝန်ကျသည့် ၀န်ထမ်းများနေထိုင်ရန် အရှေ့ပြင် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာစခန်း၊ စိတ္တမဟီ ၀န် ထမ်းအိမ်ရာစခန်းနှင့် မြရည်နန္ဒာ ၀န်ထမ်းအိမ်ရာစခန်း သုံးခုရှိသည်။
at 12/18/2013 12:33:00 PM No comments:
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ရန် ဇန်နဝါရီတွင် ညှိနှိုင်းမည်
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်နိုင်ရန် အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်း ကော်မတီက ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်တွင် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးစောလှထွန်း ကပြောကြားသည်။
ယင်းအစည်းအဝေးတွင် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဇန်နဝါရီ လကုန်တွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ အပြီးသတ် တင်ပြရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကော်မတီသို့ ရောက်ရှိနေသော အကြံပြုချက်များကို ကြိုတင် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“အခုအစည်းအဝေးမှာ ဆပ်ကော်မတီတွေ ဖွဲ့ပြီး ဘယ်အပိုင်းကို ဘယ်လိုခွဲမယ်ဆိုတာ လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်” ဟု ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းမြင့် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်) က ပြောကြားသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ပြည်သူလူထုနှင့် အသင်းအဖွဲ့အစည်းများက အကြံပြုစာ ၁၅၀၀ ကျော် ပေးပို့ထားပြီ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အကြံပြုချက်များကို အဖွဲ့ဝင် ၁၀၉ ဦးက ဥပဒေ၏ အခန်းကဏ္ဍအလိုက် သီးခြား ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် အကြံပြုစာများကို ယခုလ ၃၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ကြေညာထားသည်။
at 12/18/2013 12:27:00 PM No comments:
အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ များ ပြုလုပ်ရန် EU ကူညီမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တို့အကြား အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ များ ပြုလုပ်ရန် ဥရောပသမဂ္ဂက ကူညီမည်ဟု ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေးရာ ကောင်စီ၏ မြန်မာ့အရေး အနှစ်ချုပ် သုံးသပ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် ရုံးတာဝန်ခံ Tom Lambert ကဆိုသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွင် အဟန့်အတားသဖွယ် ကြန့်ကြာနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့လာစေရန်အတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံများအနေနှင့် အထောက်အပံ့များ ပေးရန် အဆင်သင့် ရှိနေပြီး နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ အပါအဝင် အလွှာအသီးသီး၊ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သင့်ကြောင်း အဆိုပါ သုံးသပ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရက ဆောင်ရွက်နေသော အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသိအမှတ် ပြုသော်လည်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ရရှိရေးကိုလည်း ပိုမိုမျှော်လင့်ကြောင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် ငြိမ်းချမ်ရေး စင်တာတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပါဝင် ကူညီသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ သုံးသပ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတစွာ ကျင်းပနိုင်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး အကာအကွယ်ပေးရေးတို့ အပါအဝင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အသွင်ဆောင် အကြမ်းဖက်မှုများကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရေး၊ လက်နက် လျှော့ချရေးနှင့် လက်နက် မပြန့်ပွားရေးတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ သဘောတူညီချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အဆိုပါ သုံးသပ်ချက်တွင် ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့၏ အမြင်ကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းက ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိ လာခဲ့သည့် EU ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွက် ထောက်ပံ့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရသော ပတ်ဆောင်ဟွာ လက်ကျန်လစာ ခံစားခွင့်ရမည်မဟုတ်
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်က ကစားခဲ့သော ဆီးဂိမ်း အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆီးမီးတက်ရေး အဆုံးအဖြတ်ပွဲ စဉ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားအသင်းအား ၁-၀ ဂိုးဖြင့် အရေးနိမ့်ခဲ့ရပြီးနောက် ပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပင် နည်းပြ ပတ် ဆောင်ဟွာကို ရာထူးမှထုတ်ပယ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ကြေညာခဲ့သည်။ ပတ်ဆောင်ဟွာကို ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာက ၂ နှစ်သက်တမ်းရှိ စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ရာ ၎င်း၏ စာချုပ်သက်တမ်းမှာ ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာကုန် မှပြည့်မည် ဖြစ်သော်လည်း လ၀က်ခန့်အလိုတွင် ထုတ်ပယ် လိုက် ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် လက်ကျန်လစာ ခံစားခွင့်ရရှိတော့ မည်မဟုတ်ဟု မြန်မာအသင်းမန်နေဂျာ ဦးစိုးမိုးကျော်က ပြောသည်။
“သူ့ရဲ့စာချုပ်က ဒီလကုန်မှ ပြည့်မှာဖြစ်ပေမယ့် ရာထူးကထုတ်လိုက်တဲ့အတွက် မြန်မာနည်းပြအဖြစ် သူ ဆက်ရှိနေမှာမဟုတ်သလို စာချုပ်သက်တမ်းရဲ့ လက်ကျန် လစာခံစားခွင့်လည်း ရရှိတော့မှာမဟုတ်ပါ ဘူး။ သူကလည်း သူ့တာဝန်သူယူပြီး နှုတ်ထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းဆက်စ ရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး”ဟု ဦးစိုးမိုးကျော်က ပြောသည်။ ပတ်ဆောင်ဟွာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာတွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားဆီးဂိမ်းသို့ လေ့လာသူအဖြစ်တက်ရောက် ခဲ့ကာ ဒီဇင်ဘာတွင် ၂ နှစ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား ကိုရီးယားသံရုံး၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်ဘက်မှ နေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်သာ တာဝန်ယူ ခဲ့ရပြီး လစာကို မြန်မာပေါ်စကိုကုမ္ပဏီက ပေးချေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းအား နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်စဉ်က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ကြေညာခဲ့သည်။
လစာနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင် ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိသော်လည်း တစ်လ ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ နှင့် ၆၀,၀၀၀ ကြားရှိနိုင်ကြောင်း ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းအမျိုးသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် အင်ဒိုနီးရှားအသင်းနှင့်ပွဲ၌ ပွဲထွက်စာရင်းမှချန်လှပ်ခံရသော တိုက်စစ်မှူးကျော်ကိုကို မှ ပတ်ဆောင်ဟွာကို ထိုင်ကန်တော့ပြီးမှ ဒုတိယပိုင်း၌ ၀င်ကစားခွင့်ရခဲ့ခြင်းမှာလည်း အမှန်ပင်ဖြစ် ကြောင်း မြန်မာအသင်းမန်နေဂျာ ဦးစိုးမိုးကျော်က ဆိုသည်။
“ကျော်ကိုကိုက နည်းပြရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်လို့ဆိုပြီး ပွဲထွက်လူစားရင်းက ချန်လှပ်ခံရ တာပါ။ ဒါနဲ့ ပထမပိုင်းအပြီးမှာ ဥက္ကဋ္ဌက မှားတဲ့သူ တောင်းပန်လိုက်ပါဆိုလို့ ကျော်ကိုကိုက ထိုင်ကန် တော့တောင်းပန်တော့မှ ၀င်ကစားခွင့်ရခဲ့တယ်”ဟု ဦးစိုးမိုးကျော်က ပြောသည်။ ပွဲပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုစည်းမျဉ်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို မသိရှိဟု ပတ်ဆောင်ဟွာက ပြောဆိုခဲ့ ခြင်းအပေါ်တွင်လည်း ဦးဇော်ဇော်က ဒေါသပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ပွဲမတိုင်ခင်ရက်၊ ပွဲကစားမည့်ရက်များတွင် တာဝန်ရှိသူအားလုံး၊ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်အားလုံးက အသိပေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး နံရံကို လက်သီးနှင့်ထိုးခဲ့သည်။
at 12/18/2013 12:08:00 PM No comments:
“Miss Universe & Missology ၀က်ဘ်ဆိုဒ်က အယောက် ၈၀ စရွေးတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါကကျတော့ အလှမယ်ပွဲတွေကို အထူးသီးသန့်စောင့်ကြည့်တဲ့ မီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုပေါ့။ အရင်နှစ်တွေကတော့ တစ်နှစ်လုံးမှာ အကောင်းဆုံး ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဆုရယ်၊ အလှဆုံး အလှမယ်ဆုတစ်ခုရယ် ချီးမြှင့်တယ်။ ဒီနှစ်တော့ ဘယ်လိုရွေးချယ်ပေးမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လဲ အတိအကျ ဘာမှ မသိရသေးဘူး။ Like လုပ်ခိုင်းတာလဲ တွေ့တယ်။ ဘယ်လိုထပ်ရွေးချယ်မလဲဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်” ဟု Miss Supr-anational Myanmar Organization မှ ကိုဝေယံအောင်က ပြောသည်။ ယင်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်က ပြုလုပ် သည့် အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲ Most Beautiful Queen of 2013 အတွက် ကိုယ်နှစ်သက်သည့် အလှမယ် များကို Like လုပ်ပြီးရွေးချယ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ခင်ဝင့်ဝါသည် Miss Supranational 2013 ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်The Ideal Beauty Website ၏ အယောက် ၁၀၀ စာရင်းတွင် စတင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အယောက် ၅၀ ထပ်မံ ရွေးချယ်ခြင်း တွင်လည်း ထပ်မံရွေးချယ် ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။
at 12/17/2013 01:37:00 PM No comments:
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ရမည်းသင်းမြို့ မိုးထိမိုးမိဒေသရှိ အမျိုးသား ကြီးပွား တိုးတက်ရေး ရွှေတူးဖော် ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ၏ ရွှေ လုပ်ကွက်များတွင် ခိုးဝင် လုပ်ကိုင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ၂၃ ဦးကို သမ္မတ အမိန့်ဖြင့် မန္တလေး လေဆိပ်မှတဆင့် ပြည်နှင်ပို့ဆောင် ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
“ခိုးဝင်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ပြည်နှင် ပို့ဆောင်တယ် ဆိုတာ သမ္မတရဲ့ အမိန့်နဲ့ပဲ လုပ်ဆောင်လို့ ရတာပါ။ ကျနော်တို့က ဖြစ်ရပ်တွေကို တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဆီ တင်ရတယ်။ အဲဒီကမှ သမ္မတရုံး အဆင့်ဆင့်ပေါ့။ အခုလို ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးခွင့်ရှိတာ သမ္မတ လက်မှတ်ပါမှ လုပ်ခွင့်ရှိတာပါ” ဟု မန္တလေးတိုင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရမည်းသင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်ကွက်
- လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်သူများ၏ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းသည် ခါးနာသည့်အခါ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းရပ်
် ဆိုင်းတတ်ကြသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အကြောဆန့်ခြင်း၊ ယောဂလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် ခါးနာရောဂါကို အမြန်သက်သာစေသည်။
Ref: Health Updates Journal
at 12/17/2013 01:32:00 PM No comments:
ဒီဇင်ဘာ ၁ရ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် သမ္မတ နေရာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရေး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများ ပြောင်း လဲပေးရန် ဥရောပနိုင်ငံများက မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ဥရောပနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၁၅ တွင် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ ဖြစ်မလာ ပါက ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်က စတင်ခဲ့သော ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ အရာမထင် ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟုလည်း သတိပေးလိုက်သည်။
“၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပွင့်လင်းသော အားလုံးပါဝင်သည့် ယုံကြည်လောက်သော ရွေးကောက်ပွဲများ ဖြစ်လာ နိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို ပြုပြင်သင့်သည်”ဟုလည်း ဆိုထားသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွင် ၂၀၁၀ မှစ၍ မြန်မာအစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဥရောပနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက ချီးကျူးထားသည်။ လွတ်လပ်ပြီး မျှတသော ရွေး ကောက်ပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဟောင်းကို ဖိအားပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။
လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးခြင်း၊ သတင်းစာ ဆင်ဆာအားလုံး ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ လွတ်လပ်သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးခြင်း၊ ပိုမိုတိုးတက်သောဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းလာခြင်း စသည့် လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် မြန်မာအစိုးရအပေါ် အပြင်းထန်ဆုံး ဝေဖန်နေသူများ ပင်လျှင် တအံ့တသြ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
at 12/17/2013 01:26:00 PM No comments:
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ၁၃ နှစ်ပြည့် တရားပွဲကျင်းပမည်
လာမည့် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်တွင် ကျရောက်မည့် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ ၁၃ နှစ်မြောက် နှစ် ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တရားပွဲများကို သုံးရက်တိုင် ကျင်းပမည်ဟု အသင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါ် ဧရာမောင်မောင်က ဒီဇင်ဘာ ၁၆ တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် တရားပွဲကျင်းပခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး တရားပွဲများကို မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှ ၃ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်းရုံးတွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ၊ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်တွင် ဒေါက်တာနန္ဒာမာ လာဘိဝံသနှင့် ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်တွင် တွံတေးဆရာတော် အရှင်ဣန္ဒကတို့က တရားဟောမည် ဖြစ်သည်။
“ရန်ကုန် နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတာ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အတွက် အခမ်းအနားတွေတော့ မလုပ်ပါဘူး”ဟု ဒေါ်ဧရာမောင်မောင်က ပြောသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက် နံနက် ဆယ်နာရီတွင် သံဃာတော် ၁၃ ပါးကို ဆွမ်းကပ်လှူမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းနေ့တွင် လူ ရွှင်တော် အယောက် ၄၀ ကလည်း ရုပ်အလောင်း သယ်ယူမှုတွင် ပါဝင်ကူညီမည်ဖြစ်သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အ သင်း၏ခံယူချက်မှာ အသင်းသူအသင်းသားများသည် “မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပက္ခာဟူသည့် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးကို နှလုံးသွင်းကာ အများပြည်သူတို့၏ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အစရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအား တာဝန်ယူ ကူညီဖေးမ ဆောင်ရွက်ကြပါမည်”ဟု ဖြစ်သည်။
at 12/17/2013 11:02:00 AM No comments:
at 12/17/2013 11:01:00 AM No comments:
မန္တလေးမြို့တွင် အပူချိန် ရုတ်တရက် ကျဆင်းပြီး အနီးဝန်းကျင်မြို့များပါ သိသာစွာ အအေးပိုခဲ့
မန္တလေးမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်က အပူချိန် ရုတ်တရက် ကျဆင်းခဲ့ပြီး အနီးဝန်းကျင် မြို့များ၌ပါ အပူချိန် ကျဆင်း၍ သိသာ စွာအအေးပိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် မန္တလေးမြို့ အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်မှာ ၁၇ ဒသမ ၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ရှိခဲ့ရာမှ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်၌ ၁၃ ဒီဂရီ စင်ဒီဂရိတ်အထိ ကျဆင်းသွားသောကြောင့် အအေးပိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ ပါဝင်သော မြို့နယ်များတွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် အပူချိန်ထက် ၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှ ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ခန့်အထိ ကျဆင်းသွားကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (အထက်မြန်မာပြည်)မှ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
''ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် ညနေပိုင်းလောက်မှာ လေအေးတွေ စတိုက်ပြီး အအေးသိသိသာသာ ပိုလာတာကို သတိထားမိတယ်။ အရင်ရက်တွေက ညနေ ၆ နာရီဆိုရင် အနွေးထည် မ၀တ်ဘဲနေလို့ ရသေးတယ်။ အဲဒီနေ့ ညနေပိုင်းက အနွေးထည်ဝတ်ပြီးမှ အပြင်ထွက်နိုင်တယ်။ ညပိုင်း ၉ နာရီ ကျော်လောက်မှာလည်း မိုးရွာသလိုမျိုး လေတိုက်သံတွေ ကြားရတယ်။ မနက်ရောက်တော့လည်း နေသာပူနေတာ ရာသီဥတုက စိမ့်အေးနေတာပဲ'' ဟု ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ မန္တလေးမြို့၌ ၁၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ကျောက်ဆည် ၁၁ ဒသမ ၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်၊ မိတ္ထီလာ ၁၂ ဒသမ ၂ ဒီဂရီစင် တီဂရိတ်၊ မြင်းခြံ ၉ ဒသမ ၅ ဒီဂရီစင်တီ ဂရိတ်၊ ညောင်ဦး ၁၂ ဒသမ ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် ရမည်းသင်း ၁၂ ဒသမ ၂ ဒီဂရီစင် တီဂရိတ် အသီးသီး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း၌ ထူးခြားဖြစ်စဉ်အဖြစ် မိုးကုတ်မြို့၌ မိုးရွာသွန်းကာ မိုးသီးများ ကျဆင်း၍ အအေးသိသာစွာ ပိုခဲ့ပြီး ပြင်ဦးလွင် မြို့တွင်လည်း အပူချိန် ၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ ကျဆင်းသွားခြင်းကြောင့် သိသာစွာ အအေးပိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်အတွင်း မန္တလေးမြို့ နံနက်ပိုင်းအချိန်အား မြင်တွေ့ရစဉ်)
at 12/17/2013 11:00:00 AM No comments: